सन्दिप आईपीएलमा चुनिन सक्छन्, पढ्नुस ५ कारण – WicketNepal
सन्दिप आईपीएलमा चुनिन सक्छन्, पढ्नुस ५ कारण
Birat Jung Rayamajhi, २०७४ माघ १३, शनिबार १०:२८
बिश्व चर्चित र सबैभन्दा धनि क्रिकेट लिग इन्डियन प्रिमियर लिगको अक्सन भारतको बेन्गलुरुमा सुरु भैसकेको छ। अक्सन शनिबार र आइतबार चल्नेछ। अक्सनमा चासो सबैको रहने गर्छ तर यो पटक नेपाली क्रिकेट समर्थकहरुको बिशेष नजर रहेकोछ।
नेपाली लेग स्पिनर सन्दिप लामिछाने आईपीएल अक्सनमा रहेका कुल ५७८ जना खेलाडीहरुमा २१८ औं नम्बरमा छन्। सन्दिप एसोसीएट तर्फको अनक्याप्ड क्याटेगरि अन्तर्गत सुचीमा छन् जसको अक्सनमा निम्नतम २० लाख भारतीय रुपैयाँबाट बोलि लाग्न सुरु हुनेछ। अक्सनमा २४४ कुलक्याप्ड खेलाडी रहेका छन् जसमध्ये ६२ जना भारतीय छन् भने ३३२ अनक्याप्ड खेलाडी छन् जसमध्ये ३४ भारत बाहिरका छन् र २ जना एसोसिएट खेलाडी छन्।
यस भन्दा अघि शक्ति गौचन सन् २०१२ मा आईपीएल टिम राजस्थान रोयल्सको लागि ट्रायलको लागि बोलाइएका थिए तर आईपीएल अक्सनमा कुनै पनि नेपाली खेलाडीको नाम रहेको यो पहिलो पटक हो। यस अघि सन्दिप बंगलादेश प्रिमियर लिग र पाकिस्तान सुपर लिगको अक्सन सुचीमा रहीसकेका छन् तर उनलाई छनौट भने गरिएको थिएन।
एउटा आईपीएल टिम कुल १८ देखि २५ जना सम्मको टिम बनाउन पाउनेछ जसमा ८ जना बिदेशी खेलाडीहरु टिमले समाबेश गर्न पाउछ।आईपीएलमा यो पटक प्रतिबन्ध भोगेका टिम चेन्नई सुपर किंग्स र राजस्थान रोयल्सको पुनरागमन हुँदै छ र कुल ८ वटा टिम लिग खेल्दैछन्।
सन्दिपको यस कारण छ सम्भावना – ५ कारण
१. टिमको आग्रह पछि सन्दिपको नाम अक्सन सुचीमा
आईपीएल अक्सनमा सन्दिपको नाम आईपीएलले जारि गरेको पहिलो सुचीमा थिएन तर अन्तिम सुचीमा सन्दिपको नाम सहभागी टिमहरुको आग्रह पछि समाबेश गरिएको थियो। क्रिक्इन्फोका अनुसार कुल ९ जना खेलाडीहरुलाई आईपीएल फ़्रेन्चाइजको आग्रह अक्सनमा समाबेश गरिएको थियो जसमा सन्दिप पनि एक हुन्। टिमलेनै नेपाली लेग स्पिनरमा देखाएको चासोले सन्दिपलाई टिमले लिन सक्ने सम्भावना छ।
राहुल द्रविडसंग देसाई
२. मोन्टि देसाई
यु-१९ एसिया कपमा नेपालले भारतलाई पराजित गर्दा नेपाली टिमको ब्याटिंग कन्सल्टेन्ट रहेका मोन्टि देसाई आईपीएल टिम राजस्थान रोयल्सको प्रशिक्षक रहीसकेका छन् भने लामो समय राजस्थानसंग जोडिएका थिए। सन्दिपलाई देसाईले नजिकबाट नियालेका छन् र उनको क्षमता देसाईलाई थाहा छ। सन्दिपलाई अक्सन लिस्टमा ल्यान आग्रह गर्ने टिम पनि राजस्थान रोयल्स हुने अनुमान गरिएको छ जसको पछि नेपाल कनेक्सन राम्रो भएका मोन्टिको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको अनुमान सहजै गर्नसकिन्छ।
प्रविण ताम्बे, संजु स्यामसन, कामरान खान, अजित चण्डीला जस्ता आईपीएल खेलाडीहरु मोन्टिकै खोज हुन् जो ओझेलमा परेका युवा प्रतिभाहरु चिन्न माहिर मानिनेगर्छन्। टिम राजस्थानसंग राम्रो सम्बन्ध रहेका देसाई कनेक्सनले सन्दिपलाई पक्कै सहयोग गर्नेछ।
३. क्लार्क कनेक्सन
२०१६ मा हंगकंग टि-२० ब्लीटज खेल्दा सन्दिपसंगै काउलुन क्यान्टोन क्लबबाट खेलेका अस्ट्रेलियन पुर्व कप्तान माइकल क्लार्क सन्दिपको बलिंगले प्रभावित भएका थिए। त्यसै प्रतियोगिता पछि सन्दिपलाई उनले अस्ट्रेलियामा खेल्ने र प्रशिक्षण गर्ने मौका दिएका थिए भने बारम्बार नेपाली लेग स्पिनर क्षमतावान् रहेको बताएका थिए।
आईपीएल अक्सनमा छनौट भएपछि पनि क्लार्कले ‘म कुनै टिममा भएको भए सन्दीपलाई छनौट गरिहाल्थे’ भन्ने ट्वीट गरेका थिए। क्लार्कको ट्वीट पक्कै धेरै आईपीएल टिमहरुले हेरेका छन् भने उनले कुनै टिमलाई सन्दिपबारे सुझाब दिएका हुन सक्छन्। क्लार्कसंग राम्रो सम्बन्ध रहेका अस्ट्रेलियन पुर्व कप्तान रिकी पोंटिंग हाल दिल्ली डेयरडेभिल्सको प्रशिक्षक रहेका छन् र क्लार्कले पक्कै सन्दिपको बारे उनलाई बताएका छन्। क्लार्क र सन्दिपको सम्बन्धले पनि ठुलो भूमिका खेल्न सक्छ।
४. सन्दिपको चर्चा
सन्दिप लामिछाने आफ्नो बलिंगले बारम्बार चर्चामा आउने गर्छन्। सन् २०१६ यु-१९ बिश्वकपको धेरै विकेट लिने सुचीमा कुल १४ विकेट लिंदै धेरै विकेट लिने सुचीमा दोश्रो स्थानमा रहेका सन्दिपले आयरल्याण्डसंग ह्याट-ट्रिक सहित ५ विकेट लिएका थिए। उनको बलिंगले त्यतिबेला बिश्वभर चर्चा पाएको थियो र आईसीसी देखि ठुला बिदेशी मिडियाले उनको लेग स्पिनको ठुलै तारिफ गरेका थिए।
२०१७ मा अलआउट क्रिकेटले जारि गरेको बिश्वका उत्कृस्ट युवा क्रिकेटरहरुको सुचीमा समेत सन्दिप अटाएका थिए। माइकल क्लार्क एअरपोर्टमा स्वागत गर्न जाँदा होस् या फेसबुकमा सन्दिपसंग प्रत्यक्ष कुराकानी यात बारम्बार क्लार्कले गर्ने ट्वीट, सन्दिपको नाम बिश्व क्रिकेट जगतमा गुन्जीनै रहेको छ। यही चर्चाको प्रभावले सन्दिपको नाम बिश्व क्रिकेट जगतमा पनि परिचित बनेको छ जसले आईपीएलमा पनि पक्कै सहायोग गर्नेछ।
५. सन्दिपको लेगस्पिन- गुग्ली र लेगस्पिनरको फर्केको ट्रेन्ड
अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा पुनः लेग स्पिनर अझ गुग्ली बलरको ट्रेन्ड फर्किएको छ।
अफगानिस्तान स्पिनर रासिद खान बिगब्यासमा निकै सफल प्रदर्शन गरिरहेका छन् र १७ विकेट सहित धेरै विकेट लिने सुचीमा अग्रस्थानमा छन्। बिगब्यासमै अर्का लेग स्पिनर फवाद एह्मद पनि धेरै विकेट लिने सुचीमा १२ विकेट सहित सातौँ स्थानमा छन्। अर्कोतर्फ आईपीएलकै अघिल्लो संस्करणमा पनि लेग स्पिनर सफल रहेका थिए। २०१७ आईपीएलमा इमरान ताहिर , राशिद खान , युज्भेन्द्र चाहाल जस्ता लेग स्पिनरहरु धेरै विकेट लिने सुचीमा माथिल्लो क्रममा थिए।
सन्दिप लामिछाने राम्रो लेग स्पिन मात्रै हैन गुग्लीको मिश्रणमा समेत माहिर भैसकेका छन् जुन एभरेस्ट प्रिमियर लिगमा पनि देखिएको थियो। तिब्र गतिमा उनले फाल्ने गुगली बिश्वस्तरीय रहेको छ। नेपाली क्रिकेट टिमलाई डिभिजन-२ मा प्रशिक्षण गर्न आएका भारतीय प्रशिक्षक सुलाक्ष्ण कुल्कर्नीले पनि सन्दिपको बलिंगको ठुलै तारिफ गर्दै गुग्लीको तारिफ गरेका थिए।
आधुनिक समयमा ब्याट्सम्यानहरु तिब्र गतिको गुग्लीमा फस्दै विकेट गुमाएको दृस्य लगातार देखिन्छ र अझ टि-२० फर्म्याटमा गुग्ली बलरले विकेट लिने सम्भावना धेरै हुनेगर्छ। गुग्ली बलरको अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा बढेको मागको कारण पनि २५ जनाको टिममा २० लाख मूल्यमा सन्दिपलाई बिदेशी खेलाडीको कोटा पुरा गर्न पनि टिमले लिन सक्ने सम्भावना छ।
को हुन् सन्दिप लामिछाने ? पढ्नुस उनिबारे १४ रोचक तथ्य